Hama Branham havana kubvira vataura kuti “Izvozvi rangarirai kuti mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru” Kuturikirwa kwezvakataurwa KWENHEMA
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Hama Branham havana kubvira vataura kuti “Izvozvi rangarirai kuti mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru” Kuturikirwa kwezvakataurwa KWENHEMA
Izvozvi rangarirai mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru uku.
Uku kuturikira zvakataurwa kwenhema. Hama Branham havana kubvira vataura izvi. “Mutumwa mukuru” kutaura kwakawedzerwa nevanhu.
Tiri kurarama munguva yakaipa “Mess-age” yenhau dzenhema. Vanhu vanotora mazano nemiono inobva pakutaura kwakabatwa kuri kunyepa.
Muvengi mukuru wechokwadi kushandurwa kwemashoko kwakachenjera. Nhau dzenhema dzinotaurwa dzichinzi chokwadi, uye zviri nyore kuzvitenda kana mukasatarisisa mudzi wadzo. Kana vanhu vasina rudo neChokwadi, vanozoda rima pachinzvimbo chechiedza, vosarudza zvavo kutenda mukutadza.
Mutumwa wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 anouyirei panyika? Kuzoita rumuko rwevakafa.
Izvi zvingatsigirwa sei kubva kuMagwaro kuti Mutumwa mukuru anouya panyika kuzomutsa vakafa?
Asi chekutanga tarisai, aya mazwi akabatwa kubva pamharidzo yakaparidzwa kwatopera rinoda kukwana gore mumashure mekuonekwa kweGore guru uye kuziviswa kweZvisimbiso zvinomwe, iye aitaura pamusoro peMutumwa mune zvinhu zvaizoitika kwete zvakadarika.
“Mutumwa iyeye ... paachaisa tsoka imwe panyika imwe tsoka mugungwa ... kana mguva iyoyo yasvika, muchamuka kubva pakati pevakafa”.
Saka Mutumwa aive asati auya kusvika muna Ndira 1964.
Kutaura kwekuti “wakati adanidzira nenzwi guru” ndiko kudanidzira kwakaitwa naJesu paguva paRazaro kuti amumutse kubva kuvakafa.
44 Wakanga afa akabuda
“Wakati adanidzira” ndizvo zvakaitika pakafa Jesu. Kudanidzira uku kwakayambira vatsvene vemuTestamente yekare kuti vagadzirire rumuko rwavo rwaiuya nekukasika.
53 Vakabuda pamabwiro, iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakavonekwa navazhinji.
Mutumwa mukuru akamira panyika nemugungwa, nzvimbo dzakavigwa vakafa. Kumira panyika nemugungwa zvinoratidza simba rake pamusoro penyika negungwa, kwete pamusoro pevanorarama chete asi vakafa wo.
“Akadanidzira nenzwi guru, seshumba inorira”: Ndiye Mambo, Shumba yerudzi rwaJuda. Anouya kuzotora Mwenga kana mudzimai wake akafa mukati menguva nomwe dzemakereke.
Iyi inguva inoratidzwa simba guru. Kudanidzira kwaMambo anodanidza Mwenga wake kubva kumakuva. Uku kukohwa kwake kubva mumakore 2 000 enhorondo yekereke. Pakukohwa mbeu dzinobviswa pamuti. Mwenga akafa anoburitswa kubva muguva.
The first resurrection of the New Testament church occurs. Rumuko rwekutanga rwevatsvene vekereke yeTestamente Itsva rwunoitika.
ZVAKAZARURWA 20:6 Munhu unomugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa mutsvene;
Zvino kana adanidzira, Kutinhira kunomwe kunoreva manzwi ako. Asi chii chinoitika mumashure merumuko?
Mumashure merumuko rwevakafa, vatsvene vanorarama vanoshandurwa. Saka Kutinhira kunomwe kunouya kwakananganawo nekushandurwa kwevatsvene vanorarama Mwenga waKristu.
1963-1110M MWEYA IRI MUHUSUNGWA PARIZVINO
“Akaona mutumwa uyu achiuya panyika...
“Akaisa mavoko ake Kudenga, akapika neuyo anorarama nokusingaperi-peri,” Anogara nekusingagumi, Baba, Mwari, “Kuti nguva haizovipo zve,” kana izvi zvaitika. Zvinenge zvapera. Panenge pasisina. Zvapera.
Pakupera kwegore 1963, mwedzi minomwe mumashure mekuonekwa kweGore guru uye kuziviswa kweZvisimbiso zvinomwe, aive achiri kutaura pamusoro peMutumwa mukuru mune zvaizoitika. Mutumwa mukuru haana kubvira auya munguva yehushumiri hwehama William Branham.
Asi paawa rechinomwe, mutumwa wechinomwe, kuti zvakavanzika izvi zvose zvichapedziswa. Mazviona? Mutumwa wepanyika wechinomwe, maona, mutumwa waaitaura panguva iyi aive panyika. Mutumwa zvinoreva kuti “nhume.”
Zvino, mumashure maizvozvo, akaona mumwe mutumwa achiuya panyika, kwete mutumwa wepanyika aive apiwa mharidzo pano, asi (mumwe) Mutumwa mukuru akauya kubva Kudenga nemurarabungu pamusoro pake, akaisa tsoka yake panyika nemugungwa, akapika neanorarama nekusingaperi-peri, “Nguva haizovipo zve.” mazviona?
Mutumwa wechinomwe ari panyika achipedzisa zvakavanzika.
Zvino MUMASHURE MAIZVOZVO Mutumwa mukuru anouya panyika kubva Kudenga. Saka Mutumwa mukuru aizouya panyika chete mumashure mekunge hama Branham vazivisa zvakavanzika zvese.
Asi, Uyu haana kubva panyika. Anouya pasi achibva Kudenga, nekuti zvakavanzika zvose zvakapedziswa. Kana zvakavanzika zvapedziswa, Mutumwa anoti “Nguva haizovipo zve,” Kutinhira kunomwe kunobva kwareva manzwi ako.
Mutumwa haauyi kuzozivisa zvakavanzika kuhama Branham.
Mutumwa haauyi panyika kana zvakavanzika zvichiri kuziviswa.
Mutumwa anouya nekuti zvakavanzika zvinenge zvaziviswa.
Iye aive nebhuku duku yakazarurwa muruvoko rwake: .... (Zvino, zvisimbiso zvapera kuvhurwa pano. Tiri kuzvivhura izvozvi; asi izvi, zvinhu zviri kuvhurwa.) ... anoisa tsoka yake yekurudyi mugungwa, uye yekuruboshe ... panyika
Hama Branham vaifanira kuzivisa zvakavanzika zvaMwari zviri muBhaibheri. Chikamu cheizvi kwaive kuzivisa kuzarurwa kweZvisimbiso.
Kana zvakavanzika zvose zvapedziswa, ipapo Mutumwa anokwanisa kuuya nebhuku yakazarurwa nekuti zvakavanzika zvinenge zvapedziswa.
Mutumwa haauyi kana zvakavanzika zvichiri kuziviswa, inova nguva yekurarama kwehama Branham.
Bhuku yakazarurwa muruvoko rwake inotaridza kuti zvakavanzika zvose zvakaziviswa.
Ipapo mumashure mekupedziswa kweZvisimbiso zvinomwe, tinoona kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10 kuti kwaive nekutinhira kunomwe kwakavanzika kwaive kwapihwa Johane kuti anyore asi achibva azorambidzwa kunyora nezvako.
Panguva yekutinhira uku, tinoona Kristu, kana kuti Mutumwa mukuru achiuya pasi nemurarabungu pamusoro pake, achiisa tsoka yake panyika imwe mugungwa achipika kuti nguva yapera panguva iyoyo.
Apa hama Branham vakataura kuti mutumwa anokwanisa kuuya chete kana Zvisimbiso zvinomwe zvapedziswa.
Saka chimwe nechimwe chaakaudzwa kuti aparidze nemutumwa mumwe nemumwe kwaive kusiri Kutinhira.
Zvaakaparidza paChisimbiso chega chega zvakanyorwa muBhaibheri. Akazivisa zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa muBhaibheri. Kutinhira hakuna kunyorwa muBhaibheri.
Chechipiri, Kutinhira kunomwe kunokwanisa kureva chete kana Zvisimbiso zvinomwe zvapera kuziviswa.
62-1230E ICHI NDICHO CHIRATIDZO CHEKUGUMA HERE?
Zvisimbiso zvinomwe zvatiri kuedza kutaura nezvazvo, kana zvikauya parizvino, Zvisimbiso zvinomwe zvakanyorwa. Uye zvisimbiso zvinomwe izvi, sekuziva kwamunoita, kuratidzwa chete kwevatumwa vanomwe venguva nomwe dzemakereke; asi kune zvimwe Zvisimboso zvinomwe zviri kuseri kweBhuku, kunze kweBhaibheri.
… … Tarisai rudzi urwu rweMharidzo, “Kupedzisa zvakavanzika zvaMwari zvese, zvakanyorwa muBhuku.”
Paakati “Kunze kweBhaibheri”, ari kuedza kutsanangura kuti zviri kupeji rekupedzisira kwekavha, zvinoreva kuti hazvina kunyorwa mukati meBhaibheri. Asi “kunze kumashure” kweBhuku kunenge kuchiri chikamu cheBhuku iroro. Saka neimwe nzira zvakavanzwa muBhaibheri.
… Mutumwa wechinomwe, paanotaura, zvakavanzika zvaMwari zvose zvinofanira kupedziswa nekutaura kwake. Zvino mumashure mekunge zvaziviswa, Mutumwa mukuru anouya pasi achibva kudenga, anova Kristu (parizvino rangarirai, mutumwa ari kuzivisa ari panyika, inhume.)
Kristu anouya panyika (munomuona muChitsauko 10 chaZvakazarurwa), akaisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa, murarabungu uri pamusoro pake, meso akaita se- tsoka dzakaita sembiru dzomoto, nezvimwe zvakadaro, anosimudza ruvoko rwake opika naIye Anorarama nekusingaperi-peri pachigaro chehushe, achiti nguva haizovipo zve.
… … Zvino anoenderera mberi achiti, mumazuva tisati tasvika paKutinhira uku, zvakavanzika zvaMwari zvose zvinoziviswa.
Apa hama Branham vakataura hukama huri pakati pezvakavanzika neKuuya kweMutumwa mukuru paNyika.
Mutumwa anouya chete mumashure mekunge zvakavanzika zvapera kuziviswa.
Zvakavanzika zvinoziviswa Kutinhira kunomwe kusati kwareva manzwi ako panouya Mutumwa mukuru panyika.
Mutumwa haauyi kuzozivisa hama Branham zvakavanzika.
Mutumwa anouya kubva Kudenga. Mutumwa wechinomwe (nhume) anenge ari panyika paanozivisa zvakavanzika.
... Nguva yasvika, yekuti Mwanakomana wemunhu arumbidzwe.
Ko kuti nguva yasvika yekuti Mwenga wake atorwe? Chii, kuti nguva iyo yasvika yekuti nguva haizovipo zve? Mutumwa agadzirira kuisa tsoka yake imwechete panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pake, netsoka, achiti, “Nguva yapera.” uye pasina izvozvo, anosimudza ruvoko rwake achipika kuti nguva haizovipo zve panoitika izvi.
Izvi zvaive mumashure mekuonekwa kweGore guru. Akati Mutumwa mukuru agadzirira kuisa tsoka panyika. Zvinoreva kuti zvaive zvisati zvaitika. Saka Gore guru raive risiri kuzadziswa kwekuuya kweMutumwa mukuru. Rangarirai, Gore harina kubvira rauya pasi. Rakaramba riri mudenga mamaira 27 mudenga kumakore.
… Nekuda kweizvi chete, zvakavanzika zvamwari, ndizvo zvakavanzika zvemutumwa wechinomwe.
.... Zvakanaka, akazivisa zvakavanzika zvose zvaive munguva yakadarika, zvinhu zvose zviri munguva yakadarika:
Zvakazarurwa 10:1-7. Zvichazoitika.
Gore guru rakauya rikaenda. Zvakazarurwa 10:1-7 ichiri kutaura zvinhu zviri munguva inouya.
Hama Branham vari kuparidza pachisimbiso chekutanga chete. Zvisimbiso zvinomwe zvinofanira kutanga zvaziviswa. Zvino zaruriro idzodzo ndidzo dzinozofanira kuzarura zvimwe zvakavanzika zvose zviri muBhaibheri.
Chisimbiso chekutanga ichi kwaive kutanga kwechinangwa chaicho chehushumiri hwake. Humwe hushumiri hwaaive amboita yaingove gadziriro yemakore matatu ekupedzira ehupenyu hwake paaizozivisa zvakavanzika zvakadzama. (izvi hazvirevi kuti tinofanira kusiya zvimwe zvakaziviswa zveMagwaro tichitevera zvakadzama zvacho chete. Nenzira iyoyo tinozongopinda mumatambudziko makuru.)
Nekuziviswa kweChisimbiso chekutanga ichi hushumiri hwake semutumwa wechinomwe hwaive hwatanga kufamba huchipinda munguva yegondo yemuono wakadzama uye wakakosha mukati meShoko raMwari.
Kuita uku kwakaenderera mberi kubva muna 1963 kusvika muna 1965, apo hama Branham pavakazobva munhandare. Nenguva iyi vaive vakuziva zvakavanzika asi vazhinji vedu taisazviziva. Takazobatirana nazvo nguva yakazouya kumberi.
Tinoudzwa kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10, kuti kuchave nemutumwa mumazuva ekupedzisira, achabatanidza zvidimbu zviduku zvose zvaisiirirwa ozvibatanidza pamwechete. Ipapo zvakavanzika zvaMwari zvinobva zvapedziswa, pamazuva enzwi remutumwa uyu, aive mutumwa wepanyika. Zvino umwe anobva auya kubva Kudenga, nemaoko ake mudenga, murarabungu pamusoro pake, achipika kuti nguva haizovapo zve, mutumwa achipika.
1964 SHAROMI SIERRA VISTA
Asi nenguva yechinomwe, mutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvose zvinofanira kupedziswa. Mazviona? Mutumwa wepanyika wechinomwe, maona, mutumwa uyu waanotaura nezvake ipapo aive panyika. Mutumwa zvinoreva kuti “nhume”. Ipapo, mumashure maizvozvo, akaona mumwe Mutumwa mukuru achiuya panyika, kwete mutumwa uya wepanyika akapiwa mharidzo pano, asi (umwe) Mutumwa mukuru anouya kubva Kudenga nemurarabungu pamusoro pake, achiisa tsoka yake panyika nemugungwa, achipika neuyo anorarama nekusingaperi-peri kuti “Nguva haizovipo zve.”
Mutumwa anouya chete kana zvakavanzika zvapedziswa.
Chiprofita ichi chinosanganisa makore akaparidzwa nehama Branham, asi nekuda kwekuti mharidzo dzake dzaitapwa pamakaseti, zvaibatawo pamakore aizouya ataizoteerera zvaakataura pamakaseti, kana kupfurikidza kuverenga zvinyorwa zvemharidzo dzake. (Mabasa 13;27 Inoratidza kuti nekuverenga tinokwanisawo kunzwa izwi.) “Izwi” remutumwa wechinomwe raizoramba richiteererwa makore mazhinji mumashure mekufa kwake.
Asi pane chinhu chakavanzika. Zvakavanzika zvaMwari “zvicha” pedziswa. Izvi zvinoisa kukakavara. Vanhu vaizotanga kuisa kutenda kwavo pazvinhu zvisiri muMagwaro zvakaita semazwi akataurwa “nenzwi remutumwa wechinomwe”, anozosimudzwa kuva pamusoro peMagwaro otanga kuonekwa “seNzwi raMwari”.
Vamwe vanhu vanozotanga kushandura zvaakataura ipapo zvitendero zvizhinji zvinobva zvatanga. Izvi zvinopedzisira zvapatsanura veMharidzo kuva masangano ekutenda kwemakwikwi. Mubvunzo mukuru pano ndewekuti nderupi rudzi rweMharidzo rwechokwadi? Pane masangano eMharidzo mazhinji ekusarudza kubva kwaari, uye sangano rega-rega rinoti rine chokwadi chakazara.
Tinofanira kuyambirwa nechinhu chekuti Bhaibheri rakati zvakavanzika zvaMwari “zvicha”pedziswa. Izvi zvinoreva kuti pamwe. Hama Branham vakatisiira chokwadi chakakwana kuti tipatsanure zvakavanzika izvi. Asi mukufamba kwemakore vanhu vazhinji kwazvo vakaisawo mafungiro avo uye mazano avo saka izvi zviri kutibvisa kuchokwadi.
Izvi zvakashungurudza hama Branham munguva yehushumiri hwavo.
1959-0628M KEREKE YAKANYENGERWA NENYIKA
Iyo iTabernakeri yekwaBranham. VaFirisitia vari pamuri.
1965-072M VAKAZODZWA PAMAZUVA EKUPEDZISIRA
RUKA 18: 8 Ndinoti kwamuri: Uchakurumidza kuvaruramisira. Asi Mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Zvino uyu ndiwo mubvunzo. Apa ndipo pandiri kuda kusvika, kunaZvakazarurwa chitsauko 10. Tichasvikapo muchinguvana, nerimwe vhesi reMagwaro.
Akati, “ Asi namazuva enzwi remutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa.”
Uyu ndiwo mubvunzo wacho, kana mukatevera mumutsetse iwowo panguva ino, zvichapedziswa here?
“Ndichawana Kutenda here?”
Maraki chitsauko 4 ingazadziswa here parizvino,
“Uchadzorera Kutenda kwevana, pakutenda kwemadzibaba, kwekutanga, kuShoko”? Mazviona here?
Mumwedzi mishoma yekupezisira yehupenyu hwehama Branham vaishungurudzika kuti vatendi vaizotadza kudzokera pakutenda kwekereke yekutanga. Kuti zvichida vanozotadza kudzokera kuMagwaro. Kutenda kunouya chete neShoko raMwari rakanyorwa. “Kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa Shoko raMwari”.
Kupedzisa zvakavanzika zvaMwari hakungorevi mazuva ehushumiri hwehama Branham chete. Aiziva zvaaive aratidzwa naMwari.
Asi kupedzisa zvakavanzika zvaMwari kunotaurawo kwatiri nhasi uno. Tinofanira kudzoserwa kukereke yekutanga. Vatendi vazhinji vemharidzo varikutadza nekuda kwekusadzokera kune zvinorehwa neBhaibheri.
RUKA 18:8 Ndinoti kwamuri: Uchakurumidza kuvaruramisira. Asi Mwanakomana wemunhu kana achisvika, uchawana kutenda panyika here?
Vatendi veMharidzo vazhinji vanozviti vanoziva zvakawanda kwazvo kukunda vatendi vekereke yekutanga. Vashoma vavo ndivo vari kudzokera pakutenda zvakafanana nezvakatendwa nevekereke yekutanga. Tingadaro tichiziva zvimwe zvinhu zvavaisaziva, asi tinofanira kuva nedzidziso imwechete uye tichiita zvavaiita. Mbeu inokohwewa yakafanana nembeu yekutanga yakadyarwa.
64-0705 CHINHU CHIKURU
Zvino tiri papi, mazviona, tiri papi? Pane chinhu chimwechete chete, kukohwa kwasvika. Mwenga aibva. Agadzirira Kuuya kwaShe.
Panguva yekukohwa, mbeu inenge yakafanana nembeu yakatanga kudyarwa, uye inofanira kuva neShoko rese, kuti ive Mbeu.
Gohwo rinoyananiswawo nekuuya kwaShe. Zvakavanzika zvakauya kubva kunaMwari seShoko raMwari. Hama Branham vakazviona. Saka parizvino tiri pamvura yekutanga. Mvura yedzidziso. Tichiedza kudzidza dzidziso yeBhaibheri.
Tinobva tamirira Kuuya kweMutumwa mukuru kuzoita rumuko. Inenge yava nguva yekukohwa.
Ndivanani venyu vanonzwisisa kuti mutambo wePentecositi chii? Ndiwo zvibereko zvekutanga kwegohwo, zvibereko zvekutanga zverumuko, mutambo wePentecositi.
Hupenyu hwechokwadi hwese hwanga huri mudzinde, davi uye guri, hwava kuita Mbeu, dzakagadzirirwa rumuko, dzakagadzirirwa kukohwewa. Arfa auya zvino ava Omega. Amen. Vekutanga vanouya pakupedzisira, uye vekupezisira vanouya pakutanga. Mbeu, yakadyarwa, yakafa ikadarika nemuzvikamu zvizhinji zvino yadzokera kuva Mbeu zvakare.
Rumuko ndeapo Mwari paanokohwa vatendi vake vakafa kubva munguva nomwe dzemakereke (vanomiririrwa nendudzi nomwe dzeruvara dzinenge dziri pamurarabungu unenge uri pamusoro pake) nekuvaburitsa mumakuva mavakavigwa panyika kana mugungwa.
Pakukohwa koroni inobviswa padavi.
Asi asati azarura Zvisimbiso zvinomwe kuti azvizivise, akazviratidza zvinoshamisa, Akatanga kuzviratidza Kudenga. Zuva iroro vakatora mifananidzo munyika yose yeSouthern United States uye nyika yeMexco. Iyo irimo muMagazini reLife, chichiri chakavanzika kwavari. Asi aive azviratidza mudenga asati azviratidza panyika. Anogaroita izvozvo. Anotanga kuratidza zviratidzo zvake Kudenga.
Mwari asati aita chimwe chinhu chikuru panyika kwaive kuziviswa kweZvisimbiso zvinomwe, akaratidza Gore rinoshamisa sechiratidzo kudenga. Vatumwa vanomwe vakaita Gore mudenga musi wa 28 Kukadzi vakauya kuhama Branham mazuva masere akazotevera kuzovapa basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe. Gore rakaonekwa kwemaminetsi 28 kumusoro kweguta reFlagstaff mumashure mekudeuka kwezuva. Vatumwa vakazviratidza kuhama Branham pedo nemakomo eSunset Peak mamaira anoda kukwana 200 kuzasi kweguta reFlagstaff nenguva dzechisere mangwanani. Aive asina chaaiziva pamusoro pegore iri kusvika pakazoshambadzwa mifananidzo yaro kumashure kwekavha reMagazini reLife musi wa17 Bambwe.
Saka Gore rinoshamisa remuma 1963, risina kubvira rauya pasi panyika rakaramba riri chinhambwe chemamaira 27 mudenga, raive chiratidzo mudenga kana kumakore. Hama Branham vakataura zvimwechete izvi muna 1965, mwedzi mishanu vasati vasiya nyika ino.
1965-0718M KUEDZA KUBATIRA MWARI HUSIRI HURONGWA HWAMWARI
Zvino muchiitiko chikuru ichocho, kuti nyika inge isina, vachiri kushaiwa kuti chii chakaitika. KuTucson, ivo vaive pachiitiko chikuru ichi vakatora mifananidzo yaro ipapo; vachiri kushaiwa kuti chii chakaitika. Chimbori chii? Vakazviisa mumapepa, “Kune munhu here anoziva kuti chii, kuti zvakaitika sei?” Hakuna mhute kudenga uko, hakuna mhepo, hakuna hunyoro; mamaira makumi matatu mudenga. Oh, mai!
“Kuchave nezviratidzo kudenga. Kana zvinhu izvi zvikaitika, kuchave nekudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakasiyana siyana, kuchaonekwa zviratidzo kudenga, zveMwanakomana wemunhu.”
MATEO 24:30 Ipapo chiratidzo choMwanakomana wemunhu chichavonekwa kudenga:
Chiratidzo mudenga chekuti Mwari vaive vachazozivisa zvakavanzika zvavo kuti mutumwa wechinomwe azadzise hushumiri hwake.
Gore guru rakaonekwa zuva richangodoka inova nguva yemadekwana.
ZECHARIA 14:7 Asi richava zuva rimwe rinozivikanwa naJEHOVA, hapangavi namasikati kana vusiku, asi nenguva yemadekwana chiedza chichavapo.
Zvino vatumwa vanomwe vakauya mumashure mekuvonekwa kweGore kuzozivisa “chiedza chemadekwana” nezvakavanzika zvacho pamakomo eSunset Peak.
Aive mazuva masere mumashure mekuvonekwa kweGore guru musi wa 8 kurume. Sere chiverengo chinomiririra chiitiko chitsva. Chiitiko chitsva chekugona kunzwisisa Bhaibheri, nekuti zvakavanzika zvakavanzwa mariri zvaizoziviswa.
RUKA 12:54 Akati kuvanhu vazhinji, kana muchivona gore richikwira kumavirira, pakarepo munoti: Mvura ichanaya; zvoita saizvozvo.
Flagstaff, guta riri muArizona kumavirira kweAmerica. Gore guru rakavonekwa ikoko, uye pasina mwedzi mvura yezaruriro yakanaya ikazivisa zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe.
Ngatitarisei mazwi akabatwa paitaurwa asina chokwadi:
“Zvino rangarirai mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru uku.”
Kana kutaura uku kwakashandurwa, hama Branham vakambonyatsotaura kuti kudii?
Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu ari panyika panguva yekuuya uku.
Haana kubvira ataura mashoko ekuti “Mutumwa mukuru” mukutaura kwake kwekutanga. Mumwewo munhu ndiye akawedzera mashoko aya.
“Kuuya uku” kuri muhumwechete. Saka kuuya kupi kwaaitaura nezvako?
Aive ataura pamusoro pekuuya kuviri. Kuuya kwezvakavanzika pasi(1) seShoko raMwari, uye kuuya kweMutumwa panyika(2) kuzomutsa vakafa parumuko.
... asi pakupedzisira, mutumwa wechinomwe paanotanga kutaura, anobatanidza zvose zvaive zvakasaririra zvakasiiwa nevamwe vaparidzi, zvakavanzika zvinouya kubva kuna Mwari seShoko raMwari rozivisa zaruriro yaMwari yose. Zvino huMwari nezvimwe zvese zvaisanzwisiswa zvinobva zvagadziriswa. Zvakavanzika zvose: mbeu yenyoka, nezvimwe zvese zvinozoziviswa.
Ndiyo ZVANZI NAJEHOVA. Ndichakuverengerai kubva muBhuku: kutaura kwenzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa izvi zvakataurwa nemuprofita wake mutsvene. Ndiye muprofita akanyora Shoko. Pamazuva ekereke yechinomwe, nguva yekereke yekupedzisira, zvakasaririra zvose zvaisazivikanwa mukati menguva dzose dzemakereke, zvichabatanidzwa. Uye, kana zvakavanzika zvazarurwa zvakavanzika zvaziviswa, ndipo pachauya Mutumwa Mukuru, Nhume, Kristu, achiisa tsoka yake panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro wake.
Tarisai kuuya kuviri kwaakataura nezvako, kwekutanga kuuya kwezvakavanzika panyika uye kuchizouya Mutumwa mukuru panyika.
Zvino zvikamu zvishoma zvezvinyorwa zvakazotevera akataura kuti
63-0317E MUSIYANO URIPO PAKATI PENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE NEZVISIMBISO ZVINOMWE
..….. Zvino anodzoka zvakare muChitsauko 10 mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvose zvipedziswe uye kuti Zvisimbiso zvizarurwe, zvakare kuti ataure kuti nguva yapera. Iye akati, “Nemazuva enzwi remutumwa wechinomwe, zvakavanzika zvinofanira kupedziswa yobva yasvika nguva yekuonekwa kweMutumwa Mukuru. Tava pedyo, imwe nzvimbo. Ndizvo chaizvo.
Kutaura kwekupedzisira uku kunobuditsa pachena kuti Mutumwa mukuru anouya panyika mumashure mekunge zvakavanzika zvapedziswa.
Anobva azoti yava nguva yekuti Mutumwa avonekwe, saka Mutumwa aive asati auya pakauya zvakavanzika panyika kuzozivisa Zvisimbiso zvinomwe zvaakaparidza.
Saka Mutumwa haauye kuzozivisa Zvisimbiso zvinomwe.
Ngatitarisei mitsetse mikuru mitatu:
Chekutanga kuuya kweZvisimbiso.
“Zvakavanzika zvakaburuka kubva kunaMwari seShoko raMwari zvikazivisa zvakazarurwa zvose zvaMwari.”
Hama Branham vaifanira kuva panyika pakuuya uku nekuti vaifanira kupedzisa zvisimbiso.
Chechipiri, kuuya kweMutumwa mukuru.
“Uye kana zvisimbiso zvazarurwa zvakavanzika zvaziviswa, Mutumwa mukuru anouya panyika, Nhume, Kristu”.
Kuuya uku kunoitika chete mumashure mukuzarurwa kweZvisimbiso zvinomwe kwapera.
“Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya uku.”
“Kuuya uku” kwakataurwa kuri kumwechete. Kuuya kupi pakati pekuuya kuviri kwaari kutaura nezvako? Kuuya kwezvakavanzika here kana kuti kuuya kweMutumwa mukuru?
Hama Branham vaifanira kuva vari panyika paiuya zvakavanzika panyika muna 1963-1965 nekuti vaifanira kuzvizivisa kuvanhu.
Kuuya kweMutumwa mukuru kwaizoitika chete kana zaruriro yaMwari yezvakavanzika yapedziswa.
Asi hama Branham vaizivisa zvakavanzika kusvika munaZvita 1965 paakaurayiwa. Saka mutumwa uyu haangadaro akauya Zvita wegore 1965 asati asvika.
Gore harina kubvira rauya pasi, rakaramba riri chinhambwe chemamaira 27 mudenga. Gore raive kumusoro kweFlagstaff mamaira 200 kumusoro kwemakomo eSunset Peak kwakasangana vatumwa nehama Branham. Gore raive raonekwa mazuva masere vatumwa vasati vauya kune hama Branham.
Saka Gore guru raive risiri Mutumwa mukuru aiuya pasi sezvo Zvisimbiso zvinomwe zvaive zvisati zvaziviswa pakavonekwa Gore. Mutumwa mukuru aizouya panyika zvakavanzika zvasiviswa.
Saka Mutumwa mukuru aikwanisa kuuya panyika mumashure megore ra1965. Nenguva iyoyo hama Branham vaive vaziva pamusoro pezvakavanzika zvose asi ko isu vamwe tese? Taive tisingazivi chinhu pamusoro peZvisimbiso muna 1965.
Saka Mutumwa mukuru anokwanisa chete kuuya imwe nguva munguva dzinotevera kana Mwenga wese anorarama achakunda kuenda kudenga aziva zvakavanzika zvakakwana kuti adzoserwe kudzidziso dzeBhaibheri dzekereke yekutanga. Kana wekupedzisira apinda.
Saka hama Branham havana basa kuva vari panyika pakuuya kweMutumwa mukuru. Aive agadzirira pagore ra1965, asi hushumiri hwake hwaive husiri pamusoro pake, hwaive huripo kutigadzirira. Tiri papi nhasi uno?
Masangano eMharidzo vari kuzvipatsanura nekurwisana pamusoro pedzidziso nehunhu hwemakwikwi.
Vanotenda kuMharidzo vari kure kwazvo nekugona kutsigira kutenda kwavo neMagwaro. Vashoma kwazvo vari kutora basa rakaoma rekudzidza Bhaibheri, nekuyananisa mavhesi aro pamwechete. Izvi zvinotiita chikamu cheRwizi rweHupenyu, Bhaibheri.
Zviri nyore kwazvo kungotevedzera kutaura zvakataurwa neumwe munhu “kutsigira”dzidziso. Kadziva kaduku kemazwi akataurwa kanokwaisa kuviga nyoka yekutadza yakakuvara yaiedza kuuraiwa nehama Branham payakanzvenga ikapinda mukadziva.
Kana tikange tagadzirira, kana vamwe vanhu vadzokera pakutenda kweTestamente yekutanga, ipapo Mutumwa mukuru anobva auya panyika.
Munguva yekereke yeRaodikia Jesu akamira pamukova kunze kwekereke achigogodza mumoyo wemunhu mumwe nemumwe angamugamuchira.
Saka kutaura kwekunyepa uku kwakasimuka sei kukakura?
Mitsara miviri yakasiiwa:
“Uye kana Zvisimbiso zvazarurwa zvakavanzika zvaziviswa, ndipo panouya Mutumwa panyika, Nhume, Kristu”.
“Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe anenge ari panyika panguva yekuuya uku.”
Vakasiya kutaurwa kwakaitwa mutsetse wakatanga “wekuuya kwezvakavanzika panyika”.
Vakasiya kutaurwa kwezvakazotevera, “mumashure menguva yekuuya, kuti zvakavanzika zvichapedziswa, .... uye nguva yekuuya kweMutumwa mukuru. Tava pedyo.”
Asi kunyangwe izvi zvaive zvisina kunaka kusvika pane zvaakataura pamusoro pekuuya kweMutumwa mukuru.
“Uye kana Zvisimbiso zvikazarurwa zvakavanzika zvikaziviswa, ndipo panouya Mutumwa mukuru, Nhume, Kristu”.
Vaive vasingadi kuti Mutumwa mukuru auye panyika zvakavanzika zvaziviswa kare. Vaida kuti Mutumwa mukuru auye kuzozivisa zvakavanzika.
Saka chikamu chine mutsetse pasi chaifanira kusiiwa.
“Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu anenge ari panyika panguva yekuuya uku.”
Vakasanganisa mitsara iyi nekuwedzera “mukuru” paizwi rekuti mutumwa vakabva vaburitsa “Mutumwa mukuru” mumutsetse wechipiri.
Saka mazwi akabatwa paitaurwa akabva azova sezvinotevera
“Zvino rangarirai, mutumwa wechinomwe uyu anenge ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru.”
Uku kwakabva kwava kubata mazwi kwakatadzikwa asi pakuri dzidziso yakabva yavakwa.
“Mazwi akabatwa” aya akataurwa chekutanga seCHINHU CHAKAKOSHA chekuramba dzidziso yekutanga nekukakavara.
“Mazwi akabatwa paitaurwa” aya akayananisira Gore guru sekuuya kweMutumwa mukuru nedzimwe dzidziso dzese dzinobva kwaari.
Vaparidzi veMharidzo vaive vapererwa nemazano sezvo hapana chimwe chiitiko mumashure mekuonekwa kweGore guru raikwanisa kugadziriswa kuti riite kunge kwaive kuuya kweMutumwa mukuru.
Tarisai kuti maKristu iwayo, vakazowana chokwadi chekuti Gore rakatorwa mifananidzo nguva yekuvhima isati yatanga uye raive mamaira 200 kure nenzvimbo iyi uye mazuva masere hama Branham vasati vasangana nevatumwa pamakomo eSunset Peak, havana kuzotambirwa zvakanaka pamusoro pekushingirira kwavo. Pavakazoziva zvakare kuti Thor roketi raive raputikawo pachinhambwe chimwechete ichi kuti ritsanangure rimwe gore rechipiri rakaonekwa rakatorwawo mifananidzo paWinslow, kunova kumabvazuva kweFlagstaff, hakuna kuzoita kutambirwa kukuru kwekushingirira kwavo.
Kana mukaburitsa pachena chokwadi chinenge chisingadiwi, zvinobva zvamutsa mweya wechiCatholic wekurambwa uye kurwadziswa semuzambiringa wekunyepa.
Muzambiringa wezvokwadi unotsungairira kutendevuka kubva pane chero rudzi rwekutadza, onamatira kuzarurwa meso ake kuti agone kushandura kutenda kwake.
Mufananidzo uyu unoratidza gore duku rakadzima rakaitwa neroketi rakaputika pachinhambwe chemamaira 27 mudenga raibva kumadokero richienda kumabvazuva mamaira 20 kumashure kweGore rinoshamisa raivewo pachinhambwe chemamaira 27 mudenga, kusina kana hunyoro hwekuita nahwo gore. Makore aya ose ari maviri aive kumusoro kweguta reFlagstaff muArizona.
Chinhu chekuti hama Branham vaive vasingavhimi pakaonekwa Gore guru, saka nekudaro hapana chavaiziva pamusoro pegore iri kusvikira rashambadzwa mumagazini reLife mwedzi mitatu yakazotevera, hazvienderane nefungidziro dzekuti aive Mutumwa mukuru aive auya panyika kuzozivisa Zvisimbiso zvinomwe kwaari.
Muchaona kuti hama Branham havana kubvira vataura nezveGore guru iri mubhuku reZvisimbiso Zvinomwe, zvisinei mufananidzo weGore uri mubhuku rakashambadzwa mugore ra1967 richiti akataura nezvazvo. Asi mufananidzo weGore wakatorwa musi wa 28 Kukadzi 1963 wakashambadzwa mubhuku rinonzi Seven Seals muna 1993 richiti vatumwa vanomwe vakaita Gore guru VAPEDZA kutaura nehama Branham pamakomo eSunset Peak musi wa 8 Kurume 1963. Iye aitove mamaira 1000 kure ari kuHouston musi wa 4 Kurume kwaakaparidza mharidzo yakanzi “Mukuru”, akazoenda kuSunset Peak musi wa 6 Kurume. Mazuva aya akataurwa neMwanasikana wake Becky.
Saka zvinhu zvakakosha zvaisanganiswa, dzidziso dzaiumbwa dzichiunganidzwa asi dzaibva pazvinhu zvisiri zvechokwadi.
Zvinhu zvakakosha zvechokwadi izvi zvakazobuda pachema mumashure zvaishaisa simba dzidziso yenhema yaive yatambirwa iyi yekuti Gore raive kuuya KwaShe, kana kuuya panyika kweMutumwa Mukuru wekuna Zvakazarurwa Chitsauko 10. Nei Mutumwa mukuru akauya seGore iko kwaive kusina munhu wekuuyira?
Gore harina kubvira raburuka pasi. Rakaramba riri mudenga pachinhambwe chemamaira 27 kwemaminetsi 28, uye raive riri mamaira 200 kubva panzvimbo iyi.
Asi makereke ekukanganisa anogarozvirwira oramba zvinotaurwa nevavanoti vapikisi, sezvakaitwa nemaCatholic kuna Luther. Makereke vanovenga kuzivikanwa kuti vanokanganisa.
Kutsungirira kutendevuka hachichisiri chinhu chiri muvanhu vazuva ano. Kusvibisa zita uye hunhu hwemunhu anongedzera dambudziko kana chakaipa chiripo ndizvo zvakusarudzwa nevanhu.
64-0726M KUZIVA MAZUVA ENYU NEMHARIDZO YAWO
Pano rimwe zuva paArizona, vanhu vachigadzirisa makaseti, kuedza kuti nditaure zvandisina kutaura. Rangarirai chiratidzo pamusoro pekugadzwa paArizona! Bhaibheri rinoti, “Zvaive nani zvikuru kuti mutakure ibwe pamapfudzi penyu.” Chimwe chinhu zvakare, chekuti “Ani nani,”angave muparidzi kana ani, “achabvisa Shoko rimwe kubva pariri, kana kuwedzera shoko rimwechete kwariri!” Vanhu vachiisa tsananguro dzavo paShoko sekunge ndizvo zvariri, vachiedza kuti ritaure zvandisina kutaura, uye, harisi Shoko rangu; Ishoko rake. “Ndiyani achariwedzera, kana kubvisa kwariri!”
Hatifaniri kutsvaga zvakawandisa pamusoro pevatumwa vanomwe vachiuya kuzopa hama Branham basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe. Uku kwaive kusiri kuuya kwaShe neimwe nzira. Izvi zvakaitika murenje reSonorani pedyo nemakomo eSunset Peak pedyo neguta reTucson muArizona. Tinoyambirwa kuti tisafungire kuti Ishe vachauya munzvimbo dzerenje. Takayambirwawo zvakare kuti achange asiri mudzimba dzemukati, kana kuuya muchivande.
MATEO 24:26 Zvino kana vakati kwamuri; Tarirai, uri kurenje, regai kubuda; Tarirai uri kudzimba dzomukati, regai kutenda.
Gore chive chiratidzo chinoonekwa pagomo reSunset chekuti chimwe chinhu chikuru chaive chichida kuitika. Chiitiko ichi chaive nemitumbi miviri, chakatora nguva inenge mavhiki matatu. Vatumwa vanomwe vakauya mazuva masere kumakomo eSunset Peak vakapa hama Branham basa rekuzivisa Zvisimbiso zvinomwe. Kumberi mwedzi mumwechete uyu, kubva musi wa 17-24 Kurume, paJeffersonville muIndiana, akakwanisa kuzivisa Zvisimbiso zvitanhatu. Vatumwa havana kuzivisa chisimbiso chechinomwe chakazoramba chiri chakavanzika. Kumashure kwaizvozvo akazova nekunzwisisa Magwaro kwakadzama, akazokwanisa kuzivisa zvakavanzika zvakawanda.
Pano pane chimwe chinhu chakadzama kwazvo.
Hama Branham vanoyananisa Mutumwa mukuru uyu nemaJuda anopinda munguva yeKutambudzika kukuru.
63-0317EMUSIYANO URI PAKATI PENGUVA NOMWE DZEMAKEREKE NEZVISIMBISO ZVINOMWE
Bhuku rezvisimbiso zvinomwe rinoziviswa panguva yeKutinhira kunomwe kuna Zvakazarurwa Chitsauko 10. kana muchizviit a ... ngatiendei kunaZvakazarurwa chitsauko 10 kwekanguva kaduku, kuti muwane kunzwisisa tisati tapinda mazviri. Zvino, iyi inguva yekupedzisira, saka tererai. ... Ndakavona mumwe Mutumwa mukuru achiburuka kubva kudenga, akapfeka gore: murarabungu... uri pamusoro pake ...
Kana mukatarisisa uyu ndiye Kristu(Mazviona here?) nokuti Iye muTestamente Yekare aidaidzwa kuti Mutumwa weSungano, uye apa angene achiuya akanangana nemaJuda, nekuti kereke anenge apedza nayo. Mazviona here? Zvakanaka.
... chiso chake ... chakaita sezuva, netsoka dzake sembiru dzomoto:
Muchiri kurangarira mutumwa uya kuna Zvakazarurwa Chitsauko 1? chinhu chimwechete ichi.
Mutumwa inhume, uye iye iNhume kuvaIsraeri. Mazviona here?
Kereke inenge yakwira kudenga. Mazviona?
Ipapo, kana kugadzirira kuti ikwire kudenga. Anouya kuzotora kereke yake.
Aive nebhuku yakazarurwa muruvoko rwake.
Zvino, apa raive rakavharwa rakasimbiswa, apa rinenge razarurwa; rinenge razarurwa. Kubva panguva yekusimbiswa yatichasvika manheru ano, zvino Bhuku yazarurwa. Bhuku duku muruvoko rwake, raive rakazarurwa.
Hama Branham vakataura mabasa maviri ehushumiri hwemutumwa uyu.
Anouya kukereke yakagadzirira kuenda kudenga kunosangana naShe.
Uye anouyawo kumaJuda mumashure mekukwira kudenga kwekereke.
Kuyananisa mutumwa uyu neIsraeri zvinoreva kuti Kutinhira kunomwe, kunoreva panoburuka Mutumwa mukuru, kucharevawo kuvaIsraeri uye kuMwenga waKristu.
Achachekwa neShoko rinobva mumuromo make; rakapinza kupfuvura munondo unocheka nekwese. Vangadaidze matani enhunzi mazana emabhiriyoni kana vachida.
Ava ndiEria akadaidza nzara yemakore matatu nehafu, naMosesi akauya nehosha dzenhunzi. Kutinhira kunomwe kunonopinda munguva yeKutambudzika kukuru.
Vachave nesimba pamusoro pemvura kuishandura kuita ropa nekurova nyika nehosha kakawanda sekuda kwavo.
Chimbori chii ichi? Chii chingaunze zvinhu izvi zvese kunze kweShoko? Vanoita zvavanoda nemamiriro ekunze. Zviri pano izvi. Ndivo vanouya neChisimbiso chechitanhatu. Vanochivhura nekuchizivisa. Isimba raMwari rekushandura mamiriro ekunze. Tarirai, Chisimbiso chechiTanhatu, kushandurwa kwemamiriro ezvinhu kwakazara.
Muri kuzvinzwisisa here? Ndicho Chisimbiso chenyu. Ndiyani anochiita? Maprofita kune rumwe rutivi rusiri rwekukwira kudenga. Nesimba raMwari, Shoko raMwari, vanongoraira mamiriro ekunze. Vanokwanisa kutumira kudengenyeka kwenyika, kushandura mwedzi kuuita ropa, zuva rinokwanisa kudoka kana kuitika chero chinhu pasi pekuraira kwavo. AMEN.
Ndizvo zvazviri. Ndizvo zvazviri. Mazviona? Tarirai kuti zvisimbiso zvakazarurwa sei munguva yekereke, zvakaratidza sei vakaurairwa chitendero? Zvino kune ava vaprofita vaviri vakamira pano neShoko raMwari kuti vaite chero zvavada nemamiriro ekunze, vanozunguza nyika. Zvinoratidza zvega kuti ndiyani anozviita. NdiMosesi naEria, ‘ nekuti ndihwo hushumiri hwavo huchidzoswa zvakare: varume ava vari vaviri. Oh maiwe! Mazviona here manje? Maona kuti Chisimbiso chechitanhatu chii? Ndivo vaprofita vaya.
Parizvino tarirai. Musarega zvichikudzipai, asi tarirai kuti chii chakazarura Chisimbiso ichi: vaprofita. Mazviona? Amen. Ndizvozvo. Oh tiri kurarama munguva yegondo, hama, musoro mudenga pakati pemakore. Vakazarura Chisimbiso chechitanhatu. Vane simba rekuita izvozvo. Amen. Ndicho Chisimbiso chenyu chechitanhatu chakazarurwa. Mazviona?
Saka zvinhu zvinobva zvaoma pano. Zvakazarurwa Chitsauko 10 inobata nyaya dzakadzama.
Mutumwa ari kuuya kuzomutsa Mwenga wake akafa kuvaHedeni asi achauyawo akanangana nevaIsraeri. Kutinhira kwakareva aburuka kuchabatawo pamaprofita maviri kuvaIsraeri. Kana vaprofita vakanzwa kureva uku vachazarurawo Chisimbiso chechitanhatu.
Vakazarura Chisimbiso chechitanhatu, asi hama Branham vakazivisa kuzarurwa kweChisimbiso chechitanhatu. Kuziviswa kwekuzarurwa kweZvisimbiso kunotipa mukana wekuziva mamiriro achange akaita zvinhu. Kuziviswa kweChisimbiso chechitanhatu kwaive kwekuti kushandurwa kwemamiriro ezvinhu munguva yeKutambudzika. Maprofita maviri vachazadzisa zvese apo vanoraira mamiriro ezvinhu vachiita chikamu chavo. Zaruriro inotiudza nezvazvo. Kuzarurwa kwayo ndiko kwakazviita.
Hatizivi Pope waantikristu wekupedzisira nezvaachange achiita. Tingori nemunongedzo wezviitiko zvenguva yeKutambudzika kukuru. Vaprofita vaviri vachange vachinyatsoziva kuti ndiyani uye kuti anoita nezvei. Ndiwo musiyano uri pakati pezaruriro yekuziviswa kweZvisimbiso, nekuzarurwa kweChisimbiso chechitanhatu chaiko. Hatizivi kuti hwamanda nomwe nendiro nomwe zvimbori zvii. Maprofita maviri kumaJuda vachange vachiziva zvese nezvazvo.
Chitsauko 10 hachisi chitsauko chakareruka kunzwisisa. Chinotaura nezvezvinhu zvakadzama kwazvo.
Chakavanzika chikuru chakavanzwa muChitsauko ichi ndirwo rumuko.
Asi, rangarirai, kana tikangopinda mumumvuri werufu, “Ndini Rumuko neVupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru wemasimba ose aburuka akaisa hoko iyoyo pasi, ipapo, “nguva haizovapo.” Kana Mutumwa, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pake, Anopika, “Nguva haizovapo zve.” Kana nguva iyi ikasvika, muchamuka kubva pakati pevakafa. Vamwe vose vakarara pakadaro apo, imi muchapinda.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora; nesu tichashandurwa.
Pauro akavona kuuya kwaShe muzvikamu zvitatu. Kudanidzira. Inzwi reMutumwa mukuru. Uye Hwamanda yaMwari.
I VATESARONIKA 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira, nenzwi remutumwa mukuru, nehwamana yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga kumuka;
17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwechete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe mudenga.
Kudanidzira imharidzo yemutumwa wechinomwe kuzotidzosera pakutenda kuBhaibheri nekutenda kwekereke yekutanga. Mbeu pakukohwa inofanira kufanana nembeu yakadyarwa pakutanga.
6 Pakati povusiku vakanzwa mhere-mhere: Chikomba chovuya! Budai mumuchingamidze!
Eria uchavandudza zvinhu zvose.
Zvinhu zvose zvinofanira kuvandudzwa.
Muenzaniso rangarirai muTestamente Itsva izwi rekuti “pasita” (mufudzi) isu tinomuti mufundisi rakataurwa kamwechete chete. Saka hakuna simba rakabva muTestamente Itsva kuti mufundisi atonge kereke.
57-090M VAHEBERU CHIITSAUKO CHECHISHANU NECHECHITANHATU 1
Ndiratidzei neBhaibheri kuti chii chikuru, muBhaibheri, kukunda mutariri wepanzvimbo mukereke panzvimbo? Ndizvo chaizvo, hongu baba, kugadzikika kwekereke imweneimwe, kereke pachayo. Saka tichiri nerwendo rurefu tisati tadzoserwa.
Mharidzo yehama Branham ndiyo mhere-mhere yepakati povusiku- “Budai”.
Tinofanira kubuda kunosangana naye nekuti munguva yeRaodikia akamira panze pamukova wekereke. Tinofanira kudzoserwa kuShoko riri kunze kwemukova wekereke.
Asi Jesu anotaura chete kumunhu mumwe nemumwe, kwete kukereke. Pamusoro pazvose, mufundisi anoti ndiye musoro wekereke. Hakuna muviri unogona kuita misoro miviri. Saka mufundisi paanenge ari musoro mukereke ari mukereke, musoro wechokwadi, Jesu Kristu anomira kunze.
ZVAKAZARURWA 3:14 Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodikia , uti:
20 Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza: kana munhu akanzwa inzwi rangu,
Chiitiko chekutanga ichi (mhere-mhere) chinokwanisa kutsanangurwa semvura yekutanga kana kuti mvura yedzidziso apo mbeu dzinokura nekuibva muChiedza cheShoko.
Izvi zvose zvinoitika muchidanho chevanhu. Tinofanirwa kudzidziswa kubva muBhaibheri nemutumwa anenge ari munhu wenguva yechinomwe, nzira yakatendwa nevanhu venguva venguva yekereke yekutanga.
Zvino danho rechipiri harisi mumavoko edu zvachose.
Apa tinoshanda nenzwi reMutumwa mukuru zvinhu zvose zvobva zvapinda muzvikamu zvemweya unoshamisa.
Danho rechipiri iri (Inzwi reMutumwa Mukuru) rinokwanisa kutsanangurwa semvura yekupedzisira kana yekukohwa apo mbeu dzinobviswa padavi rakadzibereka.
JUDASI 1:9 Asi Mikaeri, mutumwa mukuru, nguva yaakarwa naDiaborosi, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMosesi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi wakati Ishe ngaakuraire.
Kune mutumwa mukuru mumwechete chete akataurwa muBhaibheri, Mikaeri.
DANIERI 10:21 Asi ndichakuvudza zvakanyorwa murugwaro rwazvokwadi, asi hakuna-unozvisimbisa kundorwa navava pamwechete neni, asi Mikaeri muchinda wenyu.
DANIERI 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurairo wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvika kunowakazodzwa, iye muchinda (Messias), zvichaita vhiki nomwe, vuye vhiki dzinamakumi matanhatu nembiri dzichava’po dzokuvakwa kwaro, rinenzvimbo mhamhi nemigero, asi zvichaitwa nenguva yekutambudzika.
Messias ndiye Muchinda. Asi Jesu ndiye Messias.
Mikaeri Muchinda wenyu zvakare. Saka Mikaeri ndiye Kristu- paachatora muviri wengirozi.
Ipapo anenge ari Mutumwa mukuru, akaita basa rekutora mutumbi waMosesi kubva kuna Satani anotonga nzvimbo dzevakafa muTestamente Yekare.
Zvino Jesu akakunda Satani paCalvari akatora makiyi ake erufu. Saka Jesu anozarura musiwo kuti vanhu vabude kubva munzvimbo dzerufu paanenge adira. Anoita izvi ari Mutumwa Mukuru, nekuti Satani mutumwa akatadza, ainzi Rusifa, aimbove mutumwa mukuru. Saka Jesu anosangana nekukurira Satani munzvimbo dzake.
RUKA 10:18 Akati kwavari: Ndakavona Satani achiwa kudenga semheni.
ISAYA 14:12 Haiwa wawa seiko uchibva kudenga, iwe nyamasase,
ZVAKAZARURWA 1:18 Naiye mupenyu; ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi-peri; ndine kiyi dzerufu neHadesi.
Nemamwe mashoko, nekuva nemakiyi erufu, Mutumwa mukuru, iye mutumwa mukuru Mikaeri anovhura musuwo kuti arege vatsvene vakafa vachibuda achiita rumuko.
Saka Inzwi reMutumwa mukuru riripo kumutsa vakafa. Saka Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 ndiye Mutumwa waShe kana Mutumwa mukuru izwi rake ndiro rinodaidza Mwenga akafa kubva kumakuva.
Chiso chake chakaita sezuva nekuti zuva rinokunda nekudzinga rima rose. Mutumwa anouya panyika kuzodzinga rima rerufu uye guva. Kutonga kwazvo kwekurwadzisa kunenge kwapera.
I VAKORINTE 15:55 Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, rumborera rwako ruripiko?
Rufu neguva zvaive zvenguva duku. Rumuko runozvikunda nekuzviparadza. Zvakakundwa zvachose.
Tsoka dzake dzaive dzakaita sembiru dzomoto. Chiratidzo chesimba guru uye chiedza apo anoparadza rima reguva nekutsika rufu pasi petsoka dzake.
Gore rakaonekwa muna 1963 raive risina tsoka. Asi Mutumwa mukuru anofanira kuva ari netsoka.
Ko kuti nguva yasvika yekuti Mwenga wake atorwe aende? Chii, kuti nguva yasvika yekuti nguva haizovipo zve?
Mutumwa mukuru agadzirira kuisa tsoka imwe panyika imwe mugungwa nemurarabungu pamusoro pake, netsoka,
Achiti, “Nguva haizovipo zve.” Pamusoro pazvose, anoisa ruvoko rwake mudenga achipika kuti nguva haizovipo zve panoitika izvi.
Izvi zvakataurwa mumashure mekuvonekwa kweGore guru, Mutumwa agadzirira kuuya panyika, saka haasati auya. Saka Gore rakaonekwa muna 1963 raive risiri mutumwa mukuru.
Paive pasina tsoka paGore iri, saka haangavi mutumwa mukuru.
Paive pasina tsoka saka Gore raive risina mbiru dzemoto mbiri .
I VAKORINTE 15:25 Nokuti unofanira kubata vushe, kusvikira aisa vavengi vake vose pasi petsoka dzake.
26 Muvengi wokupedzisira uchaparadzwa, ndirwo rufu.
Chiso cheGore chaive chakadzima, chisingabwinyi sezuva.
Gore guru rakavonekwa raive risina muviri waizoshongedzwa gore.
Gore guru rakavonekwa mudenga raive risina ruvoko saka raisakwanisa kubata bhuku. Paivewo pasina bhuku racho.
Chero munhu akataura kuti Gore guru iri kwaive kuzadziswa kwaZvakazarurwa Chitsauko 10 haasi kutarisa humbowo huripo.
Murarabungu, wemandudzi eruvara manomwe, ndiyo yaive sungano yaKristu nekereke. Mukati menguva nomwe dzemakereke dzakasiyana nezviitiko zvawo zvakasiyana aizoburitsa Mwenga mukereke yakagazirira. Apa anenge auya kuzotora Mwenga wake kubva munguva nomwe dzese dzekereke. Murarabungu unoreva kuti anenge akatarisana nenguva nomwe dzese dzekereke- marudzi eruvara ese ari manomwe.
Bhuku rakazarurwa rakanyorwa mazita evatsvene vake vose vakaponeswa muBhuku reGwaiana rehupenyu vaanokwanisa kuzotora zvake. Rudzikinuro runenge rwapera. Avo voga vane mazita avo ari muBhuku vanoonekwa senhaka yake, Mwenga wake. Bhuku inenge yakazarurwa, apo rumuko runoratidza avo vose vane mazita avo akanyorwamo. Panenge pasisina chakavanzika.
63-1110M MWEYA IRI MUHUSUNGWA NHASI UNO
Aive asiya chigaro chenyasha. Basa rake redzikinuro raive rapera. Akauya akatora Bhuku kubva muruvoko rwerudyi rwaiye aive agere pachigaro chehushe, uye “nguva yaive yapera.” pakarepo mutumwa akavonekwa muChitsauko chechinomwe, kana kuti Chitsauko 10 vhesi rechinomwe, achiti ... Mutumwa uyu akauya panyika akapika, kuti, “Nguva haizovipo zve.” Asi, munoona, muBhuku umu maive nevaive vadzikinurwa. Raive Bhuku redzikinuro. Zvose zvaaive adzikinura zvaive zvakanyorwa muBhuku. Vose vaaive afira vakanyorwa muBhuku, uye haaizosiya chigaro chake kusvikira apedza kudzikinura. Uye haana kukwanisa kuvadzikinura pamuchinjiko, nekuti zvaive zvakagadzirirwa ivo muBhuku reGwaiana reHupenyu, iye aizogara ipapo kuti avasanganise kusvikira iye munhu wekupedzisira apedziswa. Ngaarumbidzwe!
... Uye apo zita rekupedzisira muBhuku parakadzikinurwa, Gwaiana rakauya rikatora Bhuku, “Ndini ndakazviita!”
“Mumazuva ezwi” remutumwa wechinomwe anoenderera mberi kusvikira wekupedzisira apinda.
Ipapo zviitiko zvinobva zvatamira kumaprofita maviri kuIsraeri. Asi vachadzidzawo zvakavanzika kubva kudzidziso dzemutumwa wechinomwe, kubva kumakaseti akarekodwa.
63-1110M MWEYA IRI MUHUSUNGWA
Kuchave nehushumiri hucharatidza mabasa makuru, Joere akadaro, asi kunenge kusisina nguva yedzikinuro. Zvinenge zvapera.
Gwaiana rapedza kutora Bhuku raro, vakadzikinurwa varo vapera.
Sekuparidza kwakatanga kuita Jesu akarambwa, akaenda kunovhima kutsvaga vaya vaive mukati imomo, akavaparidzira ivo vaive muhusungwa, asi havana kutendevuka, hapasisina nguva yeruponeso, hushumiri humwechete uhu huchadzokorora zvakare.
Ko kana kuri kudanwa kweChitatu, kune vakarasika?
Apa Mutumwa mukuru anoburuka neBhuku yakazarurwa, kuti adaidze kubva kune vakafa mazita ose anoonekwa akanyorwa mubhuku reGwaiana reHupenyu. Akadzikinura mazita ose akanyorwa muBhuku rake.
Izvozvi anokwanisa kuburuka kuzovatora.
EKSODO 40:34 Ipapo gore rakafukidza tente rokusongana, kubwinya kwaJEHOVA kukazadza tabernakeri.
Kufukidza kana kushonga gore chiratidzo chekuzadzwa nekubwinya kwaMwari.
Mutumwa mukuru achaita rumuko nekubwinya.
Ipapo Kutinhira kunomwe kunoyanana nekushandurwa kwemiviri yeMwenga anorarama, sezvo izvi zvichizoitika mumashure merumuko. Izvi zvese zvikamu zvemvura yekupedzisira kana kuti mvura yegoho inouya kuti mbeu dzibviswe kubva pamadzinde adzo.
tiri papi? Kune chinhu chimwechete chete, goho rasvika. Mwenga aibva. Agadzirira zvino Kuuya kwaShe.
Kana dzidziso kana kuti mvura yekutanga yekudyara ikadarika tikange tadzidza zvidzidzo zvedu kubva kuBhaibheri, ipapo Mumwe anofanira kuuya kuzokohwa achibvisa mbeu pamadzinde adzakakurira. Mumwe iyeye ndiye Mutumwa Mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10, Anouya kuzokohwa vakafa kubva kumakuva avo.
Ipapo Kutinhira kunomwe kunobva kwareva kuti kutungamirire Mwenga anorarama kuti agone kubviswa mumuviri wake wenyama apihwe muviri mutsva. Iyi ndiyo nguva yakavanzika nekuti hazvina kunyorwa muMagwaro. Kutinhira kunomwe kwakavanzwa muMagwaro, saka kusvikira taziva zvakanyorwa muBhaibheri, tichapesana nekureva kweKutinhira uku.
Chinhu chikuru chichatiita kuti tipesane nezvakavanzika zvakanyorwa muBhaibheri, kusimbirira kwedu kwatinoita pakutevera zvinotaurwa nevanhu tozvishandura kusvikira zvatisvitsa pakutadza kuzvitsigira neBhaibheri.
Zvino chikamu chechitatu, Hwamanda.
Hwamanda inodaidza Mwenga wese kubva panyika kuti anosangana naMwari, Ari Kuuya mumakore ari muMuvuri watinoona. Chikamu ichi chemvura yegoho chinotibvisa panyika.
Asi kuti tive pakati pezviitiko izvi zvose, tinofanira kuva nechokwadi kuti tinotenda zvakatendwa nekereke yekutanga. Vatsvene venguva yekereke yekutanga vachamutswa kubva kuvakafa vachakwira kudenga kunosangana naShe. Kana tikatenda zvakafanana nezvavanotenda, ipapo tichakwira kudenga pamwechete navo. Kana tisingatendi zvavanotenda, vachakwira kudenga vari voga isu tichisara.
Zvatinokoshesa, patinotarisana nezuva rekupedzisira, zvinofanira kuva pakudzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente Itsva.